फोटोमा हेर्नुहोस् – जनावरका बच्चाले आमालाई देखाएको ममता कत्ति लोभलाग्दो ! « Lokpath
२०७७, ५ जेष्ठ सोमबार १८:०८
फोटोमा हेर्नुहोस् – जनावरका बच्चाले आमालाई देखाएको ममता कत्ति लोभलाग्दो !
प्रकाशित मिति : २०७७, ५ जेष्ठ सोमबार १८:०८
काठमाडौं – यो संसारमा आमा भन्दा पवित्र माया गर्ने अर्को को मान्छे होला ? अहँ ! तपाईले दोस्रो विकल्प भन्नुभयो भने तपाईले आफूलाई जन्माउने आमालाई बुझ्न सक्नुभएन । अनि भन्नुहोला आमाले पनि हत्या हिंसा गरेका खबर आउँछन् त । हजुर तपाईको कुरामा सहमत । तर मान्नुहोस् कि हो, यो विश्व एउटा यस्तो सृष्टि हो तपाईलाई यति खराब मान्छे पनि छन् है भन्नका लागि ति मानिसहरु पैदा भएका हुन् । तर आमाले आफूलाई दुख कष्ट सहेर आफ्ना बच्चाको लागि निरन्तर माया, ममता, स्नेह, हेरचाह, स्याहारसुसार सेवा गर्छिन् । नपत्याए यी फोटोफिचर हेरेपछि तपाई दंग पर्नुहुन्छ ।
मानिसहरुका आमामात्रै होईन आमाको नाता नै त्यस्तो हो कि कुनैपनि जीव जनावरका आमाले पनि उनीहरुलाई त्यति नै माया गर्छन् । बच्चाले पनि त्यति नै सताउँछन् । उनीहरुमा भएको यो भावनालाई फोटोग्राफर र अन्य मानिसहरुले कैद गरेका छन् । हेर्नुहोस् त ।
१. यी बच्चाहरु कति भाग्यमानी !”
२. यो सानो छाउरोले पृथ्वीमा सबैभन्दा राम्रो ठाउँ भेट्टाएको हुनुपर्छ।
3. उ आमालाई देखाउन चाहन्छ कि उ आमालाई औधी माया गर्छ ।
4. उसले ठान्दो हो की आमाको पेट उत्तम तकिया हो।
5. के यो अहिलेसम्मकै सहज आरामदायी स्थान जस्तो देखिएन ?
6. यो बिरालो खुशीको मिठो सागर प्राप्त गर्ने मात्राका लागि तयार थिएन । तर उसका बच्चाले उसलाई असीमीत माया देखाए ..
7. लुकेर आक्रमण किनकि सधैं उच्च सतर्क रहनु आमाको काम हो
8. मम्मी बिराला उनको १ घण्टाको बच्चाको साथमा
9. आमाको शक्ति, आमाको माया
10. बच्चाले आमाको ध्यानाकर्षण गर्न यस्तो गर्छ । अब थाहा पाउनुभयो आमा बाख्राको दाह्री किन त्यहाँ छ ?
11. कलिला पञ्जा फिँजाएर पौडिन किन जरुरी पर्यो जब आमाले पखेटा फिँजाएर डुंगा बनाईदिन्छिन् भने
12. स – सानो स्नेहले संसार दिन्छ भने आमाभन्दा प्यारो के होला ?
13. उ ! मम्मी भएपछिको खुशी । मम्मी एक्सप्रेस !!
14. मम्मी आराम चाहन्छिन् । उ खेल्न चाहन्छ । जसरीहुन्छ ध्यान भंग गर्ने विचारमा देखिन्छ, उसको बच्चा ।
15. त्यहाँ एकान्त भन्ने विकल्प रहँदैन । जब बच्चाहरु माया दिन हरबखत तयार छन् ।
16. बादलमा सुतेजस्तै लाग्दो हो, उसलाई । आमाको माया छेलोखेलो !!
17. आमाको शरीरमा कुल्चनु । उफ्रनु । चढ्नु । टोक्नु । अहो उ कुनै रुख चढ्न सिकीरहेको छ ।
18. निरन्तर आश्चर्य
19. तिनीहरूको जीवनको सबैभन्दा डरलाग्दोसागै रोचक सवारी
20. यो बाच्छो आमालाई कस्तो माया देखाउँदै छ । हेर्नुहोस् त ।
२१. यो खुशीको मुस्कान हो, जुन आमाको पञ्जामा हुनुबाट आएको छ।
यो चाहिँ बोनस स्वरुप : आफ्नी आमालाई छोडेर ति चल्लाहरु अर्को आमामा पुग्छन् । अपनाउन पो सक्दैनन् । हेर्नुहोस् त लुटुपुटु गरेर माया बाँड्दैछन् । तर यो प्रेमले उनीहरुको आमालाई दुख दिन्छ ।
यो सामाग्री लोकपथले गुगल/विभिन्न एजेन्सी र ब्राईटसाईडको सहयोगमा तयार पारेको हो ।
यी दुई लिंक हेर्नुहोस् त !
वा ! पेरुको हुआकाचिना गाउँ (लोभलाग्दा फोटोसहित)
विकेट किपरले ब्याट्सम्यानलाई उल्लु बनाएर यसरी गरे आउट (भिडियो)
काठमाडौं । सोसल मिडियामा एउटा क्रिकेटको भिडियो अत्याधिक भाइरल भईरहेको छ । उक्त
थाईल्याण्डमा भेटियो ५ हजार वर्ष पुरानो ह्वेलको कंकाल
काठमाडौं । थाईल्याण्डमा शोधकर्ताहरु लगभग ५ हजार वर्ष पुरानो एक ह्वेलको कंकाल खोजी
भोटिङ कार्डमा कुकुरको फोटो राखिदिएपछि निर्वाचन आयोगबिरुद्ध मानहानीको केस !
काठमाडौं । भोटरको आईडी कार्डमा नाम र जन्ममितिसँग जोडिएका विभिन्न कुराहरु हुन्छन् ।
जेब्राको ज्यानमा काला र सेता धर्सा हुनुको रहस्य यस्तो !
काठमाडौं । जेब्राको जीउमा काला र सेता पट्टी वा धर्का हुन्छन् । प्रकृतिले